Ogaden News Agency (ONA) – Gudi Sare oo ka socda JOKA ayaa kurmeer ku tagay gobolka North west halkaana ku qabtay shir balaadhan
Gudi Sare oo ka socda JOKA ayaa kurmeer ku tagay gobolka North west halkaana ku qabtay shir balaadhan
Sidaan horay u soo tabinay waxaa kormeer shaqo wadanka Koonfur Africa ku marayey wafti sare oo ka socda Jaliyada Ogadeenya ee koonfur africa (JOKA) iyo kaadirka faraca gobolkaGauteng. Wufuudan ayaa shirar gooni gooni ah kula yeeshay magaalada Rustenburg oo150 kmu jirta magaladaJohannesburgiyoPretoria.
Hadaba shir aan loo kala hadhin oo ahaa shir ay dadaweyne ayey waftidu ku qabatay magalada Rustenburg 17\_ 06\_2012 oy ka soo qaybgaleen Somali weynta ku dhaqan gobalkaNorth westmagaalada Rustenburg. Waxaa shirka isugu yimid boqolaal Somali ah oo soo buux dhaafiyey hoolkii uu shirku ka socday.
Shirka ayaa wuxuu ku bilowday si habsami leh, iyadoo uu shir-gudoominayey halgame Axmed naasir C\_laahi gaashaanle. Waxaa wacdi diini ah ka soo jeedieyy hogaanka arimaha diinta iyo dacwada ee faraca Gauteng sheekh Cali Cabdi Ibraahim. Waxaa kaloo isagna hadal qiimi leh kasoo jeediyey shirka gudoomiyaha Jaaliyada Somaliyeed ee Rustenburg Sheekh Cabdi raxmaan sheekh Cumar ukun.
Waxaa shirka war bixin dheer ka soo jeediyey hogaanka arimaha bulshada ee jaaliyada Somalida Ogadeenia ee JOKA. Halgame Cade Axmed Sulub isagoo ka warbixiyey waxa qabadka jaaliyada ee wadankan Koonfur Afrika iyo kaalinta ay ka qaadatay arimaha bulshada ee Soomalida ku nool wadankan.
Waxaa asna taariikhda Ogadenia oo kooban kasoo jeediyey halgame Axmed Daahir Haaruun.
Shirkaas waxaa ka hadlay odayaasha magaalada Rustenburg sida mudane Cali Siciid oo kamid ah odayasha oogu firfircoon, wuxuuna ka sheegay madasha shirka in Soomali lawada haysto maanta oo waxan ay maamul gobaleed yadu samayn hayaan aan cuqdad la’isugu qaadin sababtoo ah buu yidhi, waa kuwo u shaqeeya cadawga umadda Somaliyeed.
Waxaa isna kahadlay sheekh Cabdi nuur oo kamid ah golaha gudiga dacwada Rustenburg. Wuxuu sh. Cabdinuur sheegay in cadawga kali ah ee Soomali ay leedahay uu yahay Itoobiya, Somaliyana ayna dagaynin ilaa qadiyada Ogadenya xal waara loo helo.
Waxaa sidoo kale ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaaliyada Soomaliyeed mudane C\_rashiid oo sheegay in umada Soomalida Ogadenia ay midoobaan say xoriyadooda u gaadhaan. Waxaa kaloo ka hadlay Jaamc Roore oo sheegay in cadawga Somaliyeed ay Itoobiya tahay. Waxaa kaloo isna ka hadlay Haashim nuur oo ah arday Somaliyeed oo wax ka barta jaamacada UNISA oo sheegay in qabyaalada la iska dhaafo. Haashim ayaa hadal aad u qiiro badan ka jeediyey goobta isagoo yidhi; “Umadda Ogadeniya waxay idin leeyahiin Somaliyeey waxaan idinka haynaa cadaw -giiniiyee nagu tageera hana noo mijin qabanina.” Waxaa kaloo goobta asagan ka hadalay halgame Axmed Cabdi Xaashi oo tibaaxay siyaasada arimaha dibada iyo sida ay ugu fashilatay Itoobiya.
Shirka oo biloowday 6.30 salada maqribnimo kadib ayaaa soo gabab gaboobay 10kii fiidnimo waxaana la isla garatay in la xoojiyo halganka xaqa ah ee shacabka S.Ogadenya.
OMAR JIGJIGA /ONA- SA